Kpido: email junk | Martech Zone
Tag: email junk
Nke a infographic si LeadPages, a ọdịda peeji ngwọta, na-enye ụfọdụ oké ghọta email ahịa na SPAM ọnụ ọgụgụ. Igodo nke akwụkwọ ozi a bụ ọtụtụ ozi ịntanetị dabara adaba na folda junk. Ohere bụ na ebe ọtụtụ n'ime gị nọ, kwa. Ikike-dabere na email-aga n'ihu na-eduga mkpọ na ịrịba click-site na akakabarede udu. Ọtụtụ ụlọ ọrụ achụmnta ego na-etinye ike ha niile iji nweta usoro ịzụ ahịa karịa ka ha chefuo ụzọ
N'oge na-adịbeghị anya, anyị nwetara nsogbu na onye na-eweta email anyị mgbe anyị weghachitere ụfọdụ adreesị email ochie na akaụntụ anyị. Otutu n'ime ha boun, anyị nwetara mkpesa SPAM na onye ọ bụla wee iwe nke na ha kpọtụrụ ndị na-eweta anyị iji mee mkpesa. Anyị merụrụ iwepu adreesị email site na akaụntụ ahụ dị ka arịrịọ sitere n'aka ndị na-eweta email anyị. Ọnụ ọgụgụ dị na infographic a site na Nlele E-mail na-arụtụ aka
Mgbe m gụrụ akụkọ na-adịbeghị anya gbasara otu IT na UK nke amachibidoro email, aghaghị m ịkwụsị ma chee echiche banyere ọrụ m kwa ụbọchị yana email ole na-apụ m ụbọchị na-arụpụta. Ajụrụ m ndị na-agụ akwụkwọ anyị ajụjụ a site na nyocha Zoomerang na mmadụ ole na ole chere na email ga-anwụ n'oge na-adịghị anya. Nsogbu a, n’uche m, abụghị ozi-e. Mgbe email tinye n'ọrụ n'ụzọ dị irè, ọ bụ
Tọzdee, Nọvemba 8, 2007 Wednesday, September 4, 2013 Douglas Karr
Enwere ihe nzuzo ruru unyi na ụlọ ọrụ Email. Ọ bụ enyí nọ n’ime ụlọ ahụ, ọ dịghị onye na-ekwu okwu banyere ya. Onweghi onye ga ekwu maka ya maka egwu nkwụghachi ụgwọ n'aka ndị mmadụ kwesiri iwebata Igbe mbata anyị. SPAM Ọ DTHGHTH IHE IJI KWESERR P Ikike Nke ahụ ziri ezi. Nụrụ ya ebe a. Aga m emeghachi ya… SPAM O D NOGHTH IHE IJI KWEE Ikike Otu oge ọzọ… SPAM enweghị ihe ọ bụla ị ga-eme